Malunga nathi - Ning Bo Xuanyi Machinery Co., Ltd.
I-Ning Bo Xuanyi Machinery Co., Ltd. Ngaba ikhethekileyo kwiminyaka engaphezu kwe-10 ye-powder metallurgy, igxininisa kwimveliso yesiseko sensimbi, isakhiwo soomatshini sentsimbi engenasici ephezulu yokusebenza, ukuchaneka okuphezulu, ukuveliswa kweoyile yengxolo ephantsi. Amashishini anezixhobo, iimveliso zisetyenziswa kakhulu kwiimoto, izithuthuthu, izixhobo zombane zasekhaya, izixhobo zombane, izixhobo zeofisi, oomatshini bezolimo, oomatshini bempahla, oomatshini bokuthunga, iimoto ezincinci kunye nezixhobo ezahlukeneyo kunye namanye amashishini.
Inkampani inezixhobo zokuqhubela phambili zasekhaya, abasebenzi abaqeqeshiweyo, baseke igumbi elikhethekileyo lekhemikhali (lokulinganisa), lixhotyiswe ngeseti epheleleyo yezixhobo zovavanyo, ezinje ngokulungelelanisa ezintathu, isixhobo sokucinga seBlowell, umvavanyi wobulukhuni beBlowell, umatshini wokomisa i-digital vickers, imicroscope yesinyithi, ukomeleza ulawulo lomgangatho, uhambelane nemarike ye-eu kunye nomgaqo-nkqubo wokhuselo lokusingqongileyo, ukuqinisekisa ukuba umgangatho wemveliso ubeka isiseko esiqinileyo.
Yaziswa eJapan kunye nezixhobo eziphambili zokubumba umgubo wesinyithi weetoni ezi-6 ukuya kwiitoni ezingama-500; Uhlobo lwebhanti enemingxuma eqhubekayo yokuthambisa iziko lombane ngo-18 intshi 2, 24 intshi 1; Isiqingatha setoni, umxube weetoni enye 1; 1 isithando somlilo esimnyama; Ukulungiswa komngundo izixhobo zokusika igolide, izixhobo zomatshini we-CNC, zonke iintlobo zokungeniswa kwilizwe laseJapan, eSwitzerland ngaphezu kweeseti ezingama-20 zezixhobo zomatshini wokuqhubekeka ngombane, kunye nokuzimela okuzimeleyo okwenziwe ngomgubo wentsimbi; Ukuza kuthi ga ngoku, sivelise ngaphezulu kwe-1500 yeentlobo zomgubo Iindawo zokunyibilikisa isinyithi kwiimodeli ezahlukeneyo, kubandakanya iinxalenye zesakhiwo kunye neendawo zegiye ezinobume bejometri ezintsonkothileyo, iipropathi eziphezulu zoomatshini kunye nezomzimba kunye neemfuno ezichanekileyo. Iipesenti ezingama-70 zeemveliso zenkampani ziyahambelana nabenzi bamashishini basekhaya nabangaphandle, iipesenti ezingama-70 zeemveliso ezinxulumene ngqo zithunyelwa eJamani, Iran, South Korea, Tunisia, Pakistan, Speyin, Japan kunye namanye amazwe kunye nemimandla Inkampani inemveliso yonyaka yeetoni 3500, malunga 85 iziqwenga zezigidi zomgubo weemveliso zentsimbi.
Eli shishini linezixhobo zemveliso eziphambili, abasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo, ngokuhambelana nomgaqo wolawulo lokholo olulungileyo ukubonelela abathengi ngeenkonzo ezisemgangathweni. Ukudala ixabiso kubathengi yinjongo ebesiyilandela, sikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba kuphela -win yinkqubela phambili yeshishini, siya kuthi, njengesiqhelo ngokungqinelana neemfuno zabathengi, sivelise iimveliso ezikumgangatho ophezulu, ukubuyisela inkxaso kubathengi kunye nokuthembela!
Siyakholelwa ukuba ukholo lwethu olulungileyo luya kubuyisa intengiso yentengiso!
Siyakholelwa ukuba iimveliso zethu ziya kubonakala kumgangatho!